खुइलिसकेको तालुमा पुनः कपाल उमार्नुहोस् - IAUA
खुइलिसकेको तालुमा पुनः कपाल उमार्नुहोस्
ramkrishna November 21, 2016	खुइलिसकेको तालुमा पुनः कपाल उमार्नुहोस्
धेरैजसो मानिसहरु कपाल झर्ने समस्याबाट ग्रस्त हुन्छन् । थुप्रै औषधी र तरिका अपनाएर पनि उनीहरुले आफ्नो खुइलिसकेको तालुमा कपाल फिर्ता ल्याउन सक्दैनन् । वातावरणीय प्रभाव, उमेर, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक धुम्रपान, हर्मोनमा असन्तुलन, पोषकतत्वमा कमी, वंशानुगत कारण, केही औषधीहरु कपाल झर्ने विभिन्न कारण हुन् ।
तपाईंको टाउकोमा लगभग १ लाख कपाल हुन्छन् । एक दिनमा ५० देखि १०० वटा कपाल झर्नु भनेको साधारण हो तर एक पटकमा यो भन्दा बढी तपाईंको कपाल झर्छ भने तपाईंले आफ्नो कपालबारे चिन्ता लिने बेला भएको छ । आज हामी तपाईंलाई यही समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिँदै छौं ।
१. तेलको मसाजः
कपाल झर्ने समस्याबाट राहत पाउने सबैभन्दा पहिलो उपाय तेलको मसाज हो । उपयुक्त कपालमा हाल्ने तेलको प्रयोग गरेर तपाईंले आफ्नो टाउकाको छालामा मसाज गर्नुहोस् । राम्रोसँग गरिएको मसाजले कपालको जरामा रक्त संचारमा मद्दत पुर्याउँछ भने यसले जरालाई बलियो पनि बनाउँछ । यसले तनावलाई पनि कम गर्ने गर्दछ ।
यसका लागि तपाईंले नरिवल, बदाम (आलमोन्ड), जैतुन, अमला र क्यास्टोरको तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
माथि उल्लेखित कुनै पनि तेलको प्रयोग गरेर औंलाको टुप्पोको सहायताले कपालमा हल्कासँग मालिस गर्नुहोस् ।
यो तरिका कम्तिमा पनि हप्ताको एकपटक गर्नुहोस् ।
प्राकृतिक रुपमा छिटो कपाल उमार्न चाहनुहुन्छ भने अमलाको प्रयोग गर्नुहोस् । भिटामिन सि, एन्टी इन्फ्लामेटरी, एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिब्याक्टेरियल जस्ता गुणले भरिपूर्ण अमलाले तपाईंको कपाल उमार्न मद्दत गर्दछ ।
अमलालाई कोरेसोमा कोर्नुहोस् र त्यसमा कागतीको रस मिसाउनुहोस् ।
यो मिश्रणले टाउकाको छालामा राम्रोसँग मसाज गर्नुहोस् । आफ्नो कपाललाई सावर क्यापले छोप्नुहोस् र रातभरी छोड्नुहोस् ।
बिहान उठेर स्याम्पुको प्रयोग गरेर नुहाउनुहोस् ।
कपाल झर्न रोक्नका लागि मेथी निकै लाभदायक मानिन्छ । मेथीको गेडामा हर्मोन एन्टिसिडेन्ट्स पाइने हुँदा यसले कपाल बढ्न मद्दत गर्दछ भने कपालको जरालाई पुन उमार्न मद्दत गर्दछ । यसमा प्रोटिन र निकोटिनीक एसिड हुने हुँदा कपाल बढ्न मद्दत गर्दछ ।
एक कप मेथीलाई रातभरी पानीमा भिजाउनुहोस् ।
बिहान यसलाई पेष्ट बनाउनका लागि पिस्नुहोस् ।
यसलाई आफ्नो कपालमा लगाउनुहोस् र सावर क्यापले छोप्नुहोस् । करिब ४० मिनेटपछि यसलाई पखाल्नुहोस् ।
यसले एक महिनासम्म प्रत्येक बिहान प्रयोग गर्नुहोस् ।
४. प्याजको रसः
प्याजमा उच्च मात्रामा सल्फर पाइने भएकाले कपाल झर्ने समस्या रोक्दछ । प्याजको रसले कपालको जरामा रक्त संचार गर्न मद्दत गर्नुका साथै नयाँ कपाल उमार्न मद्दत गर्दछ ।
सन् २००२ मा जर्नल अफ डर्माटोलोजीमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार ७५ प्रतिशत मानिसहरुले प्याजको रस प्रयोग गरेर आफ्नो कपाल पुनः उमार्न सफल भएका थिए ।
प्याजलाई कोरेसोमा कोरेर त्यसबाट रस निकाल्नुहोस् । यो रसलाई सिधै टाउकोमा लगाउनुहोस् । यसलाई करिब ३० मिनेटसम्म छोड्नुहोस् र स्याम्पुले नुहाउनुहोस् ।
तीन चिया चम्चा प्याजको रस, दुई चिया चम्चा एलोभेराको जेल र एक चिया चम्चा जैतुनको तेलको मिश्रण बनाउनुहोस् । यसलाई पखाल्नु र स्याम्पुले नुहाउनु पहिले आफ्नो टाउकोमा हालेर करिब ३० मिनेट छोड्नुहोस् ।
यी दुई मध्ये कुनै पनि तरिका हप्ताको दुई वा तीनपटक थुप्रै हप्तासम्म दोहोराउनुहोस् ।
एलोभेरामा पाइने इन्जाइमले स्वास्थ कपाल उमार्न मद्दत गर्दछ । यसमा हुने अल्कलाइजिङ गुणले कपालको जरालाई पुनः उमार्न मद्दत गर्दछ ।
यसको नियमित प्रयोगले टाउको चिलाउने समस्या पनि हट्छ भने कपाललाई बलियो र चम्किलो बनाउँछ । यसले चायाँबाट पनि राहत प्रदान गर्दछ । यसका लागि एलोभेरा जेल र जुसले काम गर्नेछ ।
एलोभेरा जेल वा जुस आफ्नो टाउकोको छालामा लगाउनुहोस् ।
यसलाई केही घण्टा यत्तिकै छोड्नुहोस् र मनतातो पानीले पखाल्नुहोस् ।
यो प्रक्रियालाई हप्तामा तीनदेखि चारपटकसम्म दोहोराउनुहोस् ।
कपाल झर्नबाट रोक्नका लागि तपाईंले बिहान खाली पेटमा एकचम्चा एलोभेराको जुस पनि पिउन सक्नुहुन्छ ।
Previous Previous post: चिसो मौसममा खानैपर्ने ५ फलफूल
Next Next post: थाहा पाउनुस्, जाडो महिनामा घाममा बसेर बदाम खानुका फाइदा